Guqula iifayile ngobuninzi be-AutoCAD / Microstation -Geofumadas
Matshi, 2011 AutoCAD-AutoDesk, Microstation-Bentley
Kuqhelekileyo ukufumana kwisidingo sokuguqula inani elikhulu leefayile ngobuninzi:
Sifumene iiprojekthi zefayile ze-dwg ezingama-45 kwifomathi ye-AutoCAD 20112. Siyazi ukuba ezi fayile zinokufundwa kwi-AutoCAD 2010 nango-2011 kodwa ukuba ikhompyuter eza kujongwa kuyo ine-AutoCAD 2008 kuphela, kufuneka siyiguqule.
Sichitha iifayile 170 DGN ngefomathi v8 udlule ukuba ifomati dwg kufuneka kusingathwa abasebenzisi iinkqubo GIS abangaxhasi olu hlobo lwefayile.
Asibhekiseli kwifayile enye, edlalwa ngayo vula / gcina njenge. Kuzo zombini iimeko, isisombululo siyimfuneko kwaye zombini i-AutoDesk kunye neBentley inayo, nangona ikwiimeko ezahlukeneyo:
Oku kusebenza kuyo nayiphi na inguqu ye-Microstation, Iyenziwa kwimenyu ephezulu:
Uguqulelo lweeNkonzo / Batch
Ikuvumela ukuba ukhethe indawo oya kuyo yeefayile eziguqulweyo. I-icon yesine isetyenziselwa ukongeza iifayile ukuze ziguqulwe, kuyathakazelisa ukuba ayenziwanga kuphela ukuguqula iifayile ze-dgn kodwa nazo naziphi na iifomathi ezixhaswayo: dgn v7, dgn v8, dwg, dxf, IGES (.igs), STEP ( .stp), .cgm, .x_t, .sat, .stl nkqu nokuguqulwa kunokuba kwezi fomathi.
Umsebenzi emva koko ungagcinelwa ukubuyela kwakhona ngexesha elizayo. Kulungile, kwimeko yeenkqubo ezithile ezenzekayo, kufuneka zilungiswe ukuze ulondolozo ngalunye olwenziwe kwimephu luthunyelwe kwirejista yokupapashwa kwewebhu ehlala iifayile kulwandiso oluthile. Ewe, ukuba awunayo iMicrostation, le nkqubo inokuqhutywa nohlobo lwetyala olukuvumela ukuba usebenze imizuzu eli-15, ixesha elaneleyo lokwenza olu hlobo lwenkqubo.
Kwimeko ye-AutoDesk, inikwe ithuluzi lokukhulula elibizwa ngokuba yi-AutoDesk Umbono We nyaniso. Kule meko ndisebenzisa ingxelo ekhutshiweyo nge-AutoCAD 2012, xa uyifaka, njengayo nayiphi na inguqulelo ye-AutoDesk 2012 icela uhlaziyo lweNET. Umsebenzi Wesikhokelo 4.
Iimpawu zifana nemibandela emininzi kwiCatch Converter ye-Microstation ngokulondoloza uludwe lomsebenzi, ulawulo lweefayili zereferensi kunye kucocwe yedatha engeyomfuneko. Olu guqulelo lukwinqanaba leefayile ze-dwg kuphela, luvumela ukuba kwenziwe utshintsho lweefomathi ezi-5 ezahlukeneyo ezinalo lo mgca ukusuka kwinguqulelo 97: R14, 200, 2004, 2007 no-2010.
Zombini izisombululo zisombulula indawo yokuqala kubasebenzisi beempawu ngokwazo. Nangona kunjalo kukho umahluko obonakalayo:
Kwimeko ye-Bentley, inethuba lokukwazi ukuguqula iifayile zibe ziifomathi ezahlukeneyo, kubandakanya i-dwg, dgn kunye ne-dxf. Ewe kunjalo, uguqulelo oluguqula lubonakala lusekwe kuhlobo oluthile olunokufundwa lulo naluphi na uhlobo lwe-AutoCAD, kubandakanya ne-200 kunye neenkqubo ze-GIS eziqonda olo hlobo.
Kukho into engalunganga, ukuze ukwazi ukusebenzisa iifayile ze-dwg 2010 kufuneka yenziwe ngeMicrostation V8i, iinguqulelo zangaphambili zivuma kuphela iifomathi ukuya kuthi ga kwi-dwg 2007. Enye into engeloncedo kukuba le ndlela ifuna ukuba ufake uhlobo lweMicrostation, nangona inokuba luvavanyo olunokhetho. Imizuzu eli-15.
Icandelo le-AutoDesk, linelungelo lokuguqulela kwiifom ezahlukeneyo ze-dwg kunye nokuba ithuluzi lokukhulula.
Ukungancedi ekubeni ingenakwenziwa kwezinye iifomathi, nkqu nakwi-dxf. Kwakhona, olu khetho alufakwanga kwi-AutoCAD, ke iinkqubo zenkqubo ngaphakathi kwesicelo ziyinkimbinkimbi, kulula ngokulula ngeMicrostation.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Kutheni kunzima kangaka ukuba umfazi alale?
Post Next Isixhobo sokuthelekisa iikhowudi okanye iifoldaOkulandelayo »
Iimpendulo ezi-4 "Guqula i-AutoCAD / iifayile zeMicrostation ezininzi"
Mva kwemini, ndifuna impendulo kwingxaki enkulu ethe yavela namhlanje, bendifuna ukwazi ukuba ndingakwazi na ukuguqula ubunzima * iifayile ze-IGS okanye ukubuyisela iifayile kwiifayile ze-DWG / DXF okanye iifayile ze-SKP ezivela kwiSketchup ngqo. Ndidinga ukuguqula malunga ne-16000 (ewe, amawaka alishumi elinesithandathu) ndifuna impendulo.
Ewe, xa ukongeza isalathisi ikunika loo ndlela.
Ndinombuzo, yintoni na kufuneka ndiyifake ukuze ndigcine indawo ehambelana nayo?
Uhlaziyo: I-AutoCAD 2012 izisa umsebenzi omtsha obizwa ngokuba yi-dwg Connect, ekuvumela ukuba uguqule iifayile ngobuninzi.